ပန်းချီဆရာ - Oleg Solovyov
အဓိက » သတင်း » တိုက်ခန်းများ၏အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ပန်းချီ
အလှအပအတှကျလူ့အလိုဆန္ဒ - အသစ်များကိုမဟုတ်ပါဘူး. သမိုင်းမကြိမ်မှာတော့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးနံရံဂူ petroglyphs တန်ဆာဆင်: ဒါကြောင့်သင့်အိမ်ပျူငှါနွေးထွေးသောစေရန်သဘာဝအလိုဆန္ဒရှိပါတယ်, လှပသော. သို့သျောယခုအတွင်းပိုင်းစတိုင်၏ Express ကိုအလေးပေး, အယူအဆဒီဇိုင်းအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်နှင့်ရိုးရိုးလည်းပန်းချီကားများ Wall နိုင်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အချို့အရောင် add. ရှေးခေတ်ကကတည်းကသိသိသာသာအသွင်ပြောင်းအနုပညာ: အသစ်တစ်ခုကိုအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ပုံစံဝယ်ယူ, ဒါပေမယ့်မူလ function ကိုထိန်းသိမ်းထား. နေဆဲ, ပန်းချီတာဝန် - သဗေဒအပျြောအပါးပေးရ.
အတွင်းပိုင်းထဲမှာခေတ်ပြိုင်ပန်းချီ, ပန်းချီကားများ, အက္ခရာ တင်., ရုပ်ပုံဖွဲ့စည်းမှု, သင့်အိမ်ထဲသို့ "ဘဝ Breathe". ယခု မှစ. အခြေအနေအပေါ်မီးခိုးရောင်နဲ့ငြီးငွေ့စရာဖြစ်အစဉ်အမြဲငြိမ်းလိမ့်မည်.
စုံလင်သောရွေးချယ်မှု - တချို့အတွင်းပိုင်းပန်းချီများအတွက်?
အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်. Visual ဝိဇ္ဇာ - ဂန္-စတိုင်နေအိမ်များမှအောင်မြင်တဲ့အပွငျ, ရိုးရှင်းသောစတူဒီယိုတိုက်ခန်းများ, апартаментов в стиле «лофт» и нестандартных помещений без единого интерьерного концепта.
Визуально расширить пространство, သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ပေါ် - အခန်းဖို့ပျူငှါနွေးထွေးသော add လွန်းရည်မှန်းချက်ကြီးဖြစ်ပါသည်.
မျိုးပွားစတိုင်အတွင်းပိုင်းလိုက်နာရမယ်, ယေဘုယျအား "ခံစားချက်" အခန်းကိုလွှဲပြောင်း, အဆိုပါသေံသတ်မှတ်ထား.
အရောင်ရွေးချယ်ရေးနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါသည် - စိုးမိုးရေးမှ contrast နဲ့တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ၏နိယာမအားဖြင့်. ပထမဦးဆုံးအမှု၌, ရုပ်ပုံ - အခန်းတင့အတွက်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအစက်အပြောက်, ဒုတိယအချက်မျိုးပွား element တွေကိုအလှဆင်ခန်းနှင့်အတူအရောင်အတွက်ကိုက်ညီ, ကတဦးတည်းဖြစ်လာ.
Пропорции и масштабы репродукции следует выбирать в соответствие с габаритами остальных предметов в помещении. ဥပမာအားဖြင့်,, над изголовьем массивной кровати будет выигрышно смотреться композиция из больших картин, в то время, как маленькая репродукция просто «потерялась бы» на фоне общих масштабов.
Абстрактные и авангардные картины прекрасно смотрятся без рамы – смело можете от нее отказаться. Особенно, если интерьер комнаты, где будут размещены полотна, တစ်ခေတ်ပြိုင်စတိုင်.
အက္ခရာ တင်., pastel နှင့်ပန်းချီအကျင့်ကိုကျင့်ဖန်အောက်တွင်ထားရှိရပါမည်. ကောင်းပြီတော်ပါတယ် antiglare: ဒါကြောင့်ပုံတူညဦးယံ၌အကြီးကြည့်ရှုမည်, အခါဆီမီးခွက်.
ရေနံစစ်ဆင်ရေးသည် frame တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်, ဖန်ခွက်ကိုမသုံးဘဲ.
ကောင်စီ: မသင်မနေရဘောင်တစ်ခုသာဂန္လိုအပ်ပါတယ် တိုက်ခန်းများ၏အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ပန်းချီ. သို့သော်ဤနည်းဥပဒေလျစ်လျူရှုထားနိုင်ပါတယ်, ပုံဘောင်များနှင့်ဖန်ခွက်ခြင်းမရှိဘဲပိတ်ထားဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျပိုကောင်းကြည့်လျှင်.
တောကျီးကန်း, ကျီးကန်း, ငှက်တို့သည်
ရှိအောင်နှစ်သက်မျိုးပွါးတက်ကောက်များနှင့်စီစဉ်ဖို့ - ထက်ဝက်သာစစ်တိုက်ခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်. သင်၏နောက်အလုပ်တခုကို - အခန်း၏နံရံပေါ်မှာနေရာချပိုင်ခွင့်. အကောင့်သို့ယူရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်:
ရှုထောင့်ဓါတ်ပုံတွေ: အထင်ကြီးအရွယ်အစား၏ပုံတူဘေးကမိုးသည်းထန်စွာကောင်းကြည့်ရှု, စကေးပရိဘောဂ, သေးသေးလေး - အတော်လေးဆန့်ကျင်.
မျိုးပွားပုံသဏ္ဍာန်. ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ partition ကိုဝတ်စုံကိုဒေါင်လိုက်ပုံ, အလျားလိုက်ပတ္တူ - အိပ်ရာ၏ဦးခေါင်းအနီးတွင်အထွေထွေဧရိယာမှ.
နောက်ခံ. မည်သည့်မျိုးပွားမှုအတွက်အကောင်းဆုံး "အခြေခံ" - Single-အရောင်မြို့ရိုးကို.
Современная фреска легко наносится на стену: ဒါဟာဝဘ်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းစွာမဆိုမျက်နှာပြင်မှပူးတွဲပါသော. သဘာဝကိုဖန်တီးရန်, တိုက်ရိုက်လွှရုပ်ပုံ 3d-နံရံရွေးနိုင်သည်.
တစ်ဦးဂန္ setting ကိုအတွက်ပန်းချီ
မြို့ရိုးပေါ်မှာခေတ်မီပုံတူမပါဘဲတစ်ဦးဂန္အတွင်းပိုင်းစိတ်ကူးရန်ခက်ခဲသည်! သမိုင်းဆိုင်ရာစတိုင်နှင့်အတူပရိဘောဂဒြပ်စင်အားသာချက်ရှုခင်းများဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ, သရုပ်မှန်ရဲ့ style ဆဲ Life နှင့်ပုံတူ. အထင်ကြီးစရာ, ထွင်းထုသို့မဟုတ်တင်းကျပ်သော - ထိုပန်းချီကားများ၏အလှတရားဿုံအကြီးအကျယ် frame ကိုပေါ်လွင်, မလိုအပ်သောအလှဆင်ဒြပ်စင်ခြင်းမရှိဘဲ.
ကောင်စီ: не следует выбирать слишком темные, угрюмые полотна. И без того строгий классический интерьер будет выглядеть достаточно мрачно. Задайте настроение чем-нибудь ярким!
Напомним: မည်သည့်အပိုဆောင်းမှတ်ပုံတင်မရှိဘဲခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်းပုံထဲမှာသက်ဆိုင်ရာ. အများစုမှာတျေပုံတူဘောင်များနှင့်ဖန်ခွက်ခြင်းမရှိဘဲအကြီးကြည့်ရှု.
ဿုံကြီးမားသောအတိုင်းအတာ၏အဖြူအနက်ရောင်-and ပန်းချီကားများအားဖြင့်ပြည့်စုံတင်းကျပ်သောနည်းပညာမြင့်. ဤအပန်းချီကားအများအပြား၏ဖွဲ့စည်းမှုစုံလင်တစ်ဦးလေထုကိုဖန်တီးဖို့, ရိုးရှင်းသောနှစ်သိမ့်. ပုံရိပ်တွေအကြောင်းကို, ထို့နောက်မြို့ပြ motif ရှိမနိုင်သင့်တယ် - ကြီးမားသောမြို့ကြီးများ၏မြို့ပြရှုခင်းများ, ခေတ်သစ်ဗိသုကာပညာ၏အကျင့်၏ပုံတူ. ဒါ့အပြင်သက်ဆိုင်ရာဂရပ်ဖစ်ပုံတူ.